"Mathura" Ikhaya/Igumbi elinamawele B eliqeshwayo eJaffna
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguRenuka
· Amagumbi okuhlambela ayi-3.5 asetyenziswa nangabanye abantu
URenuka unezimvo eziyi-28 zezinye iindawo.
Eli gumbi linebhedi ezi-2 zomntu omnye. Ukufikelela kumagumbi okuhlambela ayi-2, izindlu zangasese ezi-3, indawo yokutyela kunye negumbi lokuphumla, ikhitshi leti kunye nekofu. Iifeni zesilingi kuyo yonke indlu, amanzi ashushu, iTV, ifriji, iWiFi, umatshini wokuhlamba kunye neendawo zokupaka ziyafumaneka.
Ingasemva entle enegadi yeentyatyambo ukuze uyonwabele. Kufuphi neetempile zalapha.
- Igumbi libanzi kwaye licocekile, lineebhedi ezi-2 zabantu abangatshatanga, kodwa indlu yonke inokuqeshwa. Iitawuli kunye nelinen zinikezelwa. Iifeni zesilingi kuyo yonke indlu kunye namagumbi zigcina eli khaya lipholile kwaye likhululekile. Amanzi ashushu anikezelwa kumagumbi okuhlambela. Sikwabonelela ngokufikelela kwi-ayina kunye nomatshini wokuhlamba wokuhlamba ukuba unqwenela & neti kunye nezixhobo zokwenza ikofu ekhitshini, iTV, ifriji.
- Umthathi weNkathalelo uluncedo kakhulu kwaye unokuncedisa kwiimfuno zakho, ukwenza oku kukhetho olukhuselekileyo xa kuthelekiswa namanye amakhaya. Ifanelekile kubakhenkethi bokuqala.
-Izithuthi zikawonke-wonke / izithuthi zabucala zifikeleleka ngokulula ukusuka kule ndawo, Umnakekeli unokuncedisa ngokuququzelela oku.
Le ndlu ikwindawo yase-Urumpirai, indawo ezolileyo, ekhuselekileyo, esekelwe kusapho. Kukuhambo lwemizuzu eli-10 okanye isithuthi sikawonke-wonke esilula ukuya kwidolophu ephithizelayo yaseJaffna, edlamkileyo, ineemarike, iindawo zokutyela, iibhanyabhanya, iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi, iinqaba zakudala, iinqaba namabhodlo. Ulwandle olunoxolo lweCasuarina luhambo lweyure enye ukusuka kwidolophu yaseJaffna.